युवा नेतृत्वः भ्रष्ट र स्खलित
विमल पाेखरेल काठमाडौं, ११ भदाै
राजनीति भनेको धेरै परसम्म हेर्न सकिने दर्शन हो । जसले बीसौं वा पचासौं वर्ष परसम्म दृष्टि लगाएर आफूलाई समर्पित गर्दछ र जनताको साथ लिन्छ । त्यसले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ ।
व्यक्तिको हकमा लागु हुने विषयवस्तु यो भए पनि दार्शनिक हिसावले युगहरुको व्याख्या गरिदिन सक्ने कैयौं दार्शनिकहरुको जन्म भएको छ । इतिहासको गहिरो अध्ययन, वर्तमानको विश्लेषण र भविष्यको आँकलन गर्न सक्नु दार्शनिकहरुको खुबी हो ।
कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेख्ने बेलामा कार्ल माक्र्स ३० र एंगेल्स २८ वर्षका मात्रै थिए । संसार हल्लाउने दर्शन २८ र ३० वर्षका युवाहरुले प्रतिपादन गरेका थिए । लेनिनले ४५ वर्ष उमेरमा रसियन समाजवादी क्रान्तिको सफल नेतृत्व गरेका थिए ।
संसारमा पहिलोपटक समाजवादको स्थापना भएको थियो । २८ वर्षको उमेरमा कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक भएर माओत्सेतुङ ५५ वर्षको हुँदा चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो ।कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापकमध्येका एक उनले, आफ्नै नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न गरे ।
वीपी कोइराला २००७ सालको सशस्त्र संघर्षपछि बनेको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा ३५ वर्ष वरिपरिका थिए । मदन भण्डारी ३९ वर्षको उमेरमा पार्टीको महासचिव बनेका थिए भने माधवकुमार नेपाल ४० वर्षको उमेरमा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । मोहनविक्रम सिंह ४० वर्षको उमेरमा पार्टीको महामन्त्री बनेका थिए ।
यहाँ उल्लेख गरिएका केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् । आफै संघर्षको माध्यमबाट नेतृत्व हत्याएका व्यक्तिहरुको नाम यहाँ दिइएको हो । नेपालमा पनि युवा नेतृत्वको बहस हुँदा यी कुराहरुलाई बहसमा ल्याउँदा परिस्थिति र युवा नेतृत्वको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
युवा नेतृत्वको उद्देश्य के हो ?
राजनीतिमा सँधैभरी एकै नासको उद्देश्य हुँदैन । देशमा पञ्चायतकाल प्रारम्भ भएपछि पञ्चायत फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने तत्कालीन उद्देश्य थियो । २०६५ मा गणतन्त्र नै आयो । त्यो पनि एउटा उद्देश्य थियो । तर गणतन्त्र आएपछि युवाहरु उद्देश्यविहीन भइसकेका देखिन्छन् । उनीहरुले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो भनिरहेका छन् ।
युवा नेताहरु यति ठूलो भ्रममा छन् कि एकातिर राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो भनिरहेका छन् भने अर्कातिर प्रतिगमनको खतरा छ, राजा आउन खोज्यो भनिरहेका छन् । यसको अर्थ के हो भने राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छैन । प्रतिगामीहरु पनि बलिया छन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले युवा नेतृत्व राजनीतिक रुपमा भ्रममा बाँचिरहेको छ ।
युवाहरुले समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भुलेका छन् । क्रान्ति विना समाजवाद आउनै सक्दैन । तर उनीहरुले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्नुको अर्थ यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हाम्रो उद्देश्य हो भन्ने हो । दलाल पुँजीवादी व्यवस्था पूर्ण रुपमा पुँजीवादी व्यवस्था पनि होइन । यो पुँजीवादी व्यवस्था भन्दा पनि गएगुज्रेको प्रतिगामी व्यवस्था हो ।
दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिबलाई झन् गरिब बनाउँदै जान्छ । धनीलाई धनी बनाउँदै जान्छ । राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक बृद्धिमा जोड दिंदैन । तर युवा नेतृत्वले यही व्यवस्थालाई ठूलो मलजल गरिरहेका छन् ।
आर्थिक समृद्धि भन्ने कुरा कुन राजनीतिक विचारधारा लागु गर्ने भन्ने सिद्धान्तसित सम्बन्धित हुन्छ । दलाल पुँजीवादी राजनीतिक विचारधारा लागु गरेर गरिबहरुको भलो हुने राज्यसत्ता निर्माण हुँदैन । युवा नेतृत्व यस विषयमा पूरै भुलभुलैयामा देखिन्छ ।
समृद्धि कहीँबाट टिपेर ल्याएर प्राप्त हुने कुरा होइन । त्यसलाई राजनीतिले दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । तर युवाहरुले यस विषयमा कुनै बहसहरु गरेका छैनन् । कुनै गोष्ठीहरु गरेका छैनन्, कुनै पुस्तक लेखेका छैनन् । त्यसैले अहिलेका युवाहरुबाट धेरै आश गर्न सकिने ठाउँहरु छैनन् ।
मन्त्री भएका युवाहरुको दयनीय हालत
अहिलेको मन्त्रीपरिषद्मा केही युवा मन्त्रीहरु पनि छन् । विना मगर, योगेश भट्टराई चर्चित छन् । तर विना मगरले केही काम गरेर देखाउन सकेकी छैनन् । कारण हो, उनीसँग काम गर्ने योजना र क्षमता छैन ।
योगेश भट्टराईले कहिले लाखौं जनता उतारेर निजगढ विमानस्थल शिलन्यास गर्ने त कहिले २० हजार व्यवसायी उतारेर पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्ने भनेर हावा भाषण गर्न थालेका छन् । सुरुमै हावा कुरा गर्दा काम गर्न सकिदैन ।
हरेक दिन जसो उद्घाटन, गोष्ठी, सेमिनारमा घण्टौं बिताउने मन्त्रीहरुले काम चाहिँ कतिबेला गर्छन् भन्ने कुरा हो । जसले जति धेरै भाषणमा, कार्यक्रममा समत बिताउँछ, त्यसले त्यत्ति नै थोरै काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर मिडियाहरुले कामलाई भन्दा भाषणलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यो दुःखद पक्ष हो ।
क्याबिनेटमा भएका धेरै मन्त्रीहरुको हालत दयनीय रहेको छ । शिक्षामन्त्रीले शिक्षालाई माफियाहरुको चंगुलमा पुराएका छन् । यातायातमन्त्रीले सिण्डीकेटलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले सारा स्वास्थ्य क्षेत्र दलाल र माफियालाई सुम्पिएका छन् । कृषिमन्त्रीको हालत झनै दयनीय देखिन्छ । देशको कृषि झन्पछि झन् कमजोर बन्दै गएको छ । यसरी धेरै मन्त्रालयको हालत खराब देखिन्छ । सुधारका प्रयासहरु समेत हुन सकेका छैनन् । परिवर्तनको कुरा त टाढाको भयो ।
बहस कसरी गर्ने
निश्चय नै बहस उमेरको भन्दा पनि विचार र सिद्धान्तको गरिनुपर्दछ । कुनै व्यक्ति युवा उमेरको छ, तर विचार र सिद्धान्त प्रतिगामी बोक्छ भने त्यसले राजनीतिलाई अग्रगमनतिर लैजान सक्दैन । राजाको पक्षमा पनि धेरै युवाहरु छन् ।
तर तिनीहरुले प्रतिगामी विचार बोकेका छन् । देशबाट फालिसकेको राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने युवाहरुको पनि ठूलो जमात छ । त्यसैले युवा हुँदैमा उसको विचार सही हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
युवाहरु विचार, सिद्धान्त र राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिने खालको हुनुपर्दछ । राजनीतिमा युवा नेतृत्वको बारेमा कहिलेकाहीँ बहस हुने गर्दछ । पञ्चायती शासनविरुद्ध संघर्ष गरेको नेतृत्वले नै अहिलेसम्म देशको राजनीतिको बागडोर सम्हालेकोले त्यसप्रकारको बहस भइरहेको छ ।
कांग्रेस, नेकपा, मधेसवादी दल, समाजवादी पार्टी, मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, नेकपा (माले) इत्यादि दलका भइसकेका सम्मेलन महाधिवेशन वा आगामी एक दुई वर्षभित्र हुने महाधिवेशनबाट ७० वर्ष पुगेका नेताहरुले नै दलको नेतृत्व गर्ने देखिन्छ ।
विचार, राजनीति र सिद्धान्तमा बहस नगरीकन उमेरमा मात्रै बहस गरेर युवा नेतृत्व स्थापित हुनै सक्दैन । विचार, सिद्धान्त र योजनासहितको युवा नेतृत्व देशले खोजेको हो । बूढो भएको नेतृत्वबाट पदको मात्रै हस्तान्तरण खोजेको होइन । पदको हस्तान्तरण त विभिन्न चरणमा नियमित भइरहने प्रक्रिया हो ।
पार्टी ७० वर्षमाथिको उमेरमा जाने पक्कापक्की
कांग्रेसका पहिलो तहका सबैजसो नेता ७० वर्ष पुगिसकेका छन् । नेकपाका पहिलो तहका नेता ६५ भन्दा माथि पुगिसकेका छन् । मधेसवादी दलका पनि धेरै नेता ६५ पुगिसकेका छन् । माले, जनमोर्चा, मसाल, नेमकिपाको अवस्था पनि त्यही छ । पार्टीहरुको संरचना, पार्टीभित्रको सन्तुलन र शक्तिसंघर्ष हेर्दा अझैँ १० वर्ष दोस्रो तहका नेताहरुको पालो आउने देखिंदैन ।
हरेक ५ वर्षमा हुने महाधिवेशनमा अहिलेको पार्टीको संरचना हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । अहिले ६५ वर्षका नेताहरुको उमेर पार्टीका महाधिवेशनहरुमा त्यतिञ्जेलसम्म ७० वर्ष पुगिहाल्छ । दोस्रो तहका नेताको पालो ७० वर्षमा आउने भएपछि अहिले ५० वर्षको उमेरमा रहेका तेस्रो तहका नेताहरुको पालो पनि बीचमा कुनै उलटफेर भएन भने ७० वर्ष नपुगी आउन सक्ने देखिदैन ।
तेस्रो तहका नेताको पालो आउँदा तिनीहरुको पनि उमेर ७० वर्षको ढिकढाक जाने देखिन्छ ।
पार्टीभित्रको बढुवा प्रक्रिया, पार्टीको संरचना आदि धेरै कारणले पार्टीको मूल नेतृत्व प्राप्त गर्नको लागि सबैजसो पार्टीमा ७० वर्ष पुग्नुपर्ने देखिन्छ । ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्न नसकिए तापनि अहिलेको सिलसिला हेर्दा त्यो अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
धेरै उमेरका नेताहरुको पकड र पार्टीभित्र युवाहरुको उपस्थिति कमजोर भएका कारणले उनीहरुले धेरै उमेरका नेताहरुको किल्ला भत्काउन झण्डै नसक्ने अवस्था देखिन्छ । ७० वर्ष भन्दा छिटो नेतृत्व हत्याउनको लागि पार्टीभित्र ठूलै उथलपुथल ल्याउन, आउनुपर्ने देखिन्छ । के पार्टीहरुमा त्यस्तो हुन सक्ला ? यो निरन्तर बहसको विषय हो । अहिले कुनै निष्कर्ष निकाल्न त सकिंदैन ।
युवाहरुको समाजवाद के हो ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा दुवै दलले समाजवाद मान्छन् । तिनीहरुको समाजवादको व्याख्या फरक फरक छ । तर गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरुले कांग्रेसको समाजवादको बारेमा कुनै एउटा लेखसमेत लेखेको भेटिदैन ।
वीपीले ५० वर्षपहिले जे लेखेका थिए, तिनीहरुको समाजवाद त्यही हो । यसको अर्थ के हो भने तिनीहरुमा कुनै भिजन छैन । तिनीहरुलाई केवल पद चाहिएको छ । कुनै पदले मात्रै काम गर्ने त होइन । वीपीको समाजवाद भजाएर पद हात पार्नु कुनै परिवर्तन होइन । त्यो चरम पदलोलुपता हो ।
नेकपाको हकमा पनि यही लागु हुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद भने पनि एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भने पनि तिनीहरुको दस्तावेजमा समाजवाद लेखिएको छ । तर कुनै पनि युवा नेताहरुले समाजवादको व्याख्या गर्न सकेको देखिंदैन ।
योगेश भट्टराई होऊन कि अरु कुनै युवा नेता तिनीहरुले समाजवादको छेउटुप्पो कसैलाई बताउन सक्दैनन् । उनीहरु पूरापूर कुहिरोको काग हुन् । पुष्पलालले जे लेखे त्यही हो, मदन भण्डारीले जे लेखे त्यही हो ।
घनश्याम भुसालको समाजवादबारे नेकपामा कुनै बहस हुने गरेको छैन । उनले दलाल पुँजीवादमाथि जसरी निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन्, त्यसले नेकपाका सबै नेताकार्यकर्तालाई बिझाउँछ । किनभने नेकपाका सबैजसो नेताकार्यकर्ता त्यही दलाल पुँजीको भरमा टिकेका छन् ।
घनश्याम भुसाल र राम कार्कीको खराब हालत
नेकपाभित्र घनश्याम भुसाल र राम कार्कीले धेरै सैद्धान्तिक बहस गर्न खोजेका देखिन्छन् । उनीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीका नीतिहरुका बारेमा बेलाबेलामा जनतालाई सम्झाउने पनि गरेका छन् । तर सुनिदिने मान्छेहरु थोरै छन् ।
घनश्याम भुसालले त राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनिरहेका छन् । तर राम कार्कीले भने त्यसो भनेको देखिदैन । सैद्धान्तिक अस्पष्टता नै तिनीहरुको ठूलो कमजोरी बन्न पुगेको छ । माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताहरुबाट नै तिनीहरुको पतन भएको छ ।
वर्गीय राजनीतिबाट उनीहरु पूर्णतः संसदीय राजनीतिमा पुगेका छन् । संसदीय राजनीतिले मात्रै जनताको मुक्ति गर्न सक्दैन भन्ने कुरा माक्र्सवादको कखरा जानेको सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । त्यसैले घनश्याम भुसाल र राम कार्कीहरुले सैद्धान्तिक बहसलाई भुलभुलैयामा पार्नु हुँदैन ।
किन भ्रष्टीकरण भयो ?
युवाहरु विचार, सिद्धान्तका लोभी भएनन् । उनीहरुको लगाव विचार र सिद्धान्तप्रति भएन । उनीहरुको लगाव पदप्रति भयो । पैसा कमाउनप्रति भयो । सांसद भएका मन्त्री भइहाहल्ने, युवा विद्यार्थीहरु तिनै मन्त्रीको पीए बन्ने । कर्मचारीको सरुवा बढुवामा पैसा खाने ।
ठेक्का पट्टामा कमिसन खाने र आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउनमै युवाहरु केन्द्रिकरण भएको देखिएका छन् । झट्ट हेर्दा उनीहरुको आर्थिक सबलीकरण भएको कारणले उनीहरुले राजनीति गर्न सजिलो भएको छ भन्ने पनि कुरा आउला ।
तर त्यो कुरा गम्भीर गल्ती हो । मन्त्री, हाकिम, ठेकेदार र कर्मचारीबाट पैसा लिएर पैसाको आडमा नेतृत्व हत्याउन खोज्ने युवाले सही प्रकारले राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । त्यसको भ्रष्टीकरण भइसकेको छ ।
दलाल पुँजीवादी चरित्र र गरिब वर्गप्रतिको बेवास्ता अहिलेको प्रमुख समस्या हो । त्यसैले त्यो चरित्रका विरुद्ध निर्मम प्रकारले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा संघर्ष गर्नुपर्दछ ।
सैद्धान्तिक संघर्षमा जोड दिऊँ
कम्युनिष्ट पार्टीमा सैद्धान्तिक संघर्ष हुनै छोडेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा पदका संघर्षहरुले ठूलठूला रुपहरु लिएका छन् । नेकपा त्यसको ताजा उदाहरण हो । जुन पार्टीले सिद्धान्त, विचार, व्यवहार भन्दा पदलाई केन्द्र विन्दु राखेर वर्षाैं छलफल गरिरहन्छ, त्यो पतनको दिशा हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
परिस्थिति जे जस्तो भए पनि सैद्धान्तिक संघर्षमा निरन्तर जोड दिइरहनु आवश्यक छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखापरेका व्यक्तिवादी, पदलोलुप, भ्रष्ट चरित्रका विरुद्ध निर्मम संघर्ष गरेर जानुको विकल्प देखिदैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, ११ भदौ २०७६, १५:२७:००
विज्ञलाई यक्ष प्रश्न : नफैलिई महामारी रोकिन्छ ?
ओलीको शासनमाथिको कालो बादल
मनुजबाबु : एउटा ‘सिर्जनशील सनक’
अयोध्याको राजनीतिक गोलचक्कर
माइतीघरको राष्ट्रिय गानमा मिसिएको मध्यम वर्गीय चरित्र
रूकुम हत्याकाण्ड : जात र कानुनको वितण्डा